Xaqiiqooyin U Gaar Ah Filmka Shahid Kapoor Kusoo Caan Baxay Ishq Vishk Ee 15-ka Sano Kasoo Wareegatay (+Video) – Filimside.net
Xaqiiqooyin U Gaar Ah Filmka Shahid Kapoor Kusoo Caan Baxay Ishq Vishk Ee 15-ka Sano Kasoo Wareegatay (+Video)
May 9, 2018 Ali Aadan
Taariikhda: May 9, 2018
Ishq Vishk waxaa wada jileen Shahid Kapoor, Amrita Rao iyo Shenaz Treasury waana film uu kusoo caan baxay atooraha Shahid Kapoor ee laga daba dhacay.
Filmkaan waxaa la daawaday maanta oo kale 9 May 2003 ayado uu noqday film guul dhex dhexaad ah gaaray balse amaan weyn ku helay Shahid.
Hadaba waxaan idiin la wadaageyna xaqiiqada filmkaan laga diiwaangaliyey ee maanta 15ka sano jirsaday:
Xaqiiqada 1aad: Shahid Kapoor inta uusan filmkaan jilin waxuu ahaan jiray dadka qoob kacayaarka ka muujiyaan jilayaasha gadaashoda waxuuna kasoo muuqday oo uu qoobka cayaar ka muujiyay filmada kala ah Dil To Pagal Hai iyo Taal qaasatan filmka Taal waxuu kamid yahay wiilasha Aishwarya Maradeeda dhirirka badan u haayan markee heeska qaadeyso.
Xaqiiqada 2aad: Shahid Kapoor hooyadisa runta ah ayaa filmkaan hooyo ugu jileyso waana atirishada caanka ah ee Neelam Azam ee dhashay Shahid.
Xaqiiqada 3aad: Shahid iyo Vishal Malhotra filmkaan aye kusoo caan baxeen sido kalena saaxiibo isku dhow aye mashruucan ku jilayaan isla sidaa si lamid ah sanadkii 2008 waxay markale saaxiibo isku dhow ku jileen filmkii Kismat Connection.
Xaqiiqada 4aad: Filmkaan magaciisa markii hore waxuu ahaa Ishq Vishk Pyaar Vyaar balse marki dambe oo tiyaatarada la saari rabay ayaa laga dhigay kaliya Ishq Vishk.
Xaqiiqada 5aad: Waa filmkii Kowaad ee uu sameyo atooraha Shahid Kapoor ee waagas laga daba dhacay xaqiiq ahaan Shahid markii uu mashruucan sameyay aad ayaa loogu waalna maadama la islahaa booskii SRK ayuu gali doona ayadoo uu marwalbaiska dhig dhigi jiray SRK.
Xaqiiqada 6aad: Waa filmkii kowaad ee ay isla sameyaan Shahid Kapoor iyo Amrita Rao bandhigooda mashruucan markii laga helay waxaa hadana loo dhiibay filmkii Vivah ee Blockbuster-ka weyn noqday.
Xaqiiqada 7aad: Heesaha flmkaan si heer sare ah aye u gadmeen Album-ka heesahan xiligaas qaali aye ahaayen maadama fanaaniin kala duwan isugu yimaaden.
Halkaan Ka Daawo Heesaha Ugu Caansan Filmka Ishq Vishk:
Waxaa Aqrisay 606
Sxb suuasha ugu ween eee aan mar walba is waydiyo waxay filimkan tv yada maxaa looga soo saari waayay sida zee aflam ama mbc waayo wali kuma arag filimkan hadana waa filim aan caadi aheen marnaba lkn maxaa diiday in uu Tv yada caan ka noqdo
Bal iga jaahil bixiya oo ila wadaaha fakirkina